Inona avy ireo tombontsoa vaovao Chili SAMPA fanapahana milina - China Lu Lu fambolena Fitaovana
Chili SAMPA fanapahana milina
Large Chili SAMPA fanapahana milina
Medium Chili SAMPA fanapahana milina
Small Chili SAMPA fanapahana milina
Tany akaikin'ny fambolenay Series
Chili vato manala milina
Chili fanapahana milina
Chili fikarakarana series
Chili Color manavaka Machine
Patanty for famoronana
Inona avy ireo tombontsoa vaovao Chili SAMPA fanapahana milina
Inona avy ireo tombontsoa avy amin'ny tahony chilli vaovao fanapahana milina? Chili tahony fanapahana milina dia ilaina ampahany amin'ny famokarana pambolena any amin'ny faritra sasany. Izany dia tsy azo ialana ny fambolena fampandrosoana fepetra hanao ny mari ny mahay mandanjalanja sy mahomby Chili SAMPA fanapahana milina. Ny mpizara capsicum tanteraka dia ahitana faritra dimy: mamahana rafitra, fandraisana rafitra, rafitra izay namafisiny, sy mampidina entana avy rafitra.
Inona no fanantenana ny Chili SAMPA manapaka milina? Ny fanontaniana dia tsy manana ho namaly faingana. Satria ao amin'ny tena famokarana sy ny fiainana, dia tsy sarotra ny mahita kely saina hitandrina. Tao anatin'ny taona vitsivitsy, ny tolotra sy ny tinady ankapobeny ny vokatra Chili nitombo isan-taona rehefa mandeha ny fotoana. Amin'izao fotoana izao, afa-tsy Qingdao, maro ireo tanàna kely sy tanàna anjara amin'ny famokarana sy ny fanodinana ny vokatra Chili amin'ny ambaratonga lehibe. Noho izany, ny isan'ny mety ho mpanjifa ny Chili SAMPA fanapahana milina dia mbola tena mahavariana. Ankoatra izany, manerana ny firenena, Hunan, Sichuan sy ny faritany hafa any Shina ihany koa ny mpamokatra ny Chili lehibe fanapahana isan-tokony. Ary ny amin'ny sasany amin'ireo faritra, Asan'ny Chili vokatra dia mbola ao am-boalohany dingan'ny handwork, ka raha misy Chili milina hametraka ny Chili fitaovana eny an-tsena, dia tsy maintsy ho raisina amin'ny midadasika isan'ny tantsaha namany. Ary toy izany tokoa vokatra hanampy anao hanatsara ny fahombiazan'ny famokarana ny Chili.
Noho ny fivoaran'ny teknolojia tapaka, satria isan-karazany mety milina eo amin'ny fiainana, izy ireo koa dia manomboka hita ao amin'ny tsena. Chili SAMPA fanapahana milina ihany koa ny iray tamin'izy ireo. Ahoana no hiatrehana karazana Chili toy izany? Mety mbola ilaina azo isafidianana toy izany andraikitra sy ny toro lalany.
Rafitra sy ny fampisehoana:
1.Performance endri-javatra: ity no tena fitaovana ampiasaina ho mando sy lena Chili manety, manapaka fahombiazana fitaovana avo, Chili simba ambany, ambony fahombiazan'ny, mampifanaraka ny samy hafa karazana sy ny Chili endrika (mila namboarina), ny milina tokana fahombiazan'ny dia mihoatra noho ny 5 fotoan 'ny tsena tsotra vokatra, ny fanatontosana ny milina rehetra tonga teo amin'ilay sehatra iraisam-pirenena mpitarika. Ity vokatra, nameno ny vondrona fanampiny fanesorana fitaovana toy ny loto sy ny fampitana, dia afaka manao ny mandeha ho azy fanatanterahana ny milina rehetra mitana anjara toerana manan-danja. Izany dia zava-dehibe ny fitaovana ho an'ny fanodinana ny maro ny fambolena vokatra. Afaka manolo maro ny zavatra hafa, afa-tsy ny asa vola, ary indrindra hanatsarana ny miasa fahombiazana.
2. Main miasa fitsipika: ao amin'ny dingan'ny sivana fandevonana amponga Rolling, ny fanapahana ivelany antsy sy ny sivana manda varingarina mamoaka ny milina ho amin'ny Chili tahony izay mandeha amin'ny sivana lavaka miankina hery, mba hahatratra ny tanjon'ny fanesorana ny tahony ny Chili.
Post fotoana: Sep-10-2018
Rehefa nanapaka vaovao Chili, ny tanana tsy ...
Inona no hevitry ny Chili tsena ...
Inona avy ireo foto-kevitra ho an'ny saina ao amin'ny ...
Inona avy ireo tombontsoa vaovao SAMPA Chili ...
Inona avy ireo tombontsoa ny chilli tahony cu ...